Ntughari ọdịyo na vidiyo dị mfe: Speechpad | Martech Zone
Thursday, January 31, 2013 Wenezdee, Jenụwarị 30, 2013 Douglas Karr
Mgbe anyị dere banyere Nyocha Youtube n'oge gara aga, otu n'ime igodo ahụ nwere nkọwa zuru ezu. Youtube anaghị arụ ọrụ ịtụgharị na ịkọwa ntụgharị okwu na vidiyo gị (mana), yabụ ịdabere na ozi ị kọwara na nkọwa vidio gị ka dị oke egwu.
Jay Baer nke Kwenye ma gbanwee atụ aro Okwu okwu ka anyị. Ha edeela ihe karịrị 1,230,645 nkeji nke ọdịyo na vidiyo maka ndị ahịa nnukwu na obere.
Otú Speechpad si arụ ọrụ
Mepụta akaụntụ - Iji nweta transcriptions nke gị ọdịyo ma ọ bụ video faịlụ ị ga-akpa mkpa ịmepụta otu akaụntụ. Ingmepụta akaụntụ na-erughị 30 sekọnd; aha, adreesị ozi-e, na okwuntughe. Ọ bụ ya.
Bulite faịlụ gị - Mgbe ịmechara akaụntụ gị, ịnwere ike bulite faịlụ ozugbo na kọmputa gị ma ọ bụ tụọ aka na faịlụ ndị dị n'ịntanetị. Nwere ike bulite faịlụ otu otu oge ma ọ bụ dị ka ọ masịrị gị n’otu bulite. Ha na akwado usoro faịlụ na vidiyo ndị a: aac, aif, aiff, amr, au, avi, cda, dct, dss, gsm, flac, flv, m4a, m4v, mpeg, mpg, mid, mov, mp2, mp3 , mp4, mpga, Ogg, raw, shn, sri, vidiyo, vox, wav, wma na wmv.
Debe iwu gị - Mgbe ị uploaded faịlụ gị niile ị ga - eme bụ ime ka ha mata mgbe ị ga - achọ ka transcriptions mere. Ha na-enye nhọrọ oge mgbanwe atọ: Otu Izu ($ 1.00 / nkeji), Oge 48 ($ 1.50 / nkeji) na 24 Awa ($ 2.50 / nkeji)
The ngwa ngwa ị ga-amasị gị transcriptions mere, ndị ọzọ ọ na-efu; ọ bụghị ihe ijuanya n’ebe ahụ. Agbanyeghị oge ntụgharị, ị ga-amazu otu ego ole transcript ọ bụla ga-eri tupu ịnye iwu gị. Enweghị ụgwọ zoro ezo, oge.
Tags: ntụgharị okwumkpọchi okwutranscriptionntụgharị vidiyo
Mgbidi nkume nkume
Feb 4, 2013 n’elekere 8:08 nke abali
Enwere m ike ịgba akaebe, Speechpad bụ nnukwu ọrụ nwere interface dị ọcha, dị mfe yana ọrụ ntụkwasị obi ngwa ngwa. Anyị na-eji ha eme ihe mgbe niile.
Feb 5, 2013 n’elekere 9:08 nke abali
Asụsụ okwu na-amasị m karịa n'ihi njikọ dị mfe ha na YouTube. Ha nwekwara ngwa mmekọrịta dị mma nke ị nwere ike iji mgbe ị na-etinye ndenye vidiyo na blọọgụ gị.
Beth Kwesịrị Ekwesị
Achọpụtara m otu ihe ha kwuru na ọnụ ahịa kacha nta maka ọrụ ndegharị, adabaghị maka YouTube, Vimeo. Ọ pụtara na anyị ga-ahọrọ atụmatụ dị elu?
Jul 13, 2015 na 9: 57 AM
Site na ngwaahịa Speechpad $1 / nkeji, ị ga-enweta ndegharị na-enweghị stampụ oge. Ọ bụrụ na ịchọrọ ndepụta okwu enwere ike ịnyefe na youtube, ị ga-achọ ịtụ isiokwu (malite na $1.50 / nkeji). Ọ bụ nnukwu ọnụ ahịa maka ogo ị nwetara.